Mbola hahagaga ve ? | NewsMada
Mbola hahagaga ve ?
Par Taratra sur 06/12/2017
Gaga aho ! Anarana fotsiny ny hoe sompitr’i Madagasikara fa, toy ny any amin’ny faritra hafa, mijaly amin’ny vidim-bary koa hay ny any Alaotra any. Sao manantena hoe handalo any ka mba hanararaotra hitondra ! Tsy misy maha samy hafa ny vidin’ny eto an-dRenivohitra sy ny any loatra e ! Indrindra, raha hiampy saram-pitaterana. Toa vao mainka hanahirana…
Lojika ny fanazavan’ny tantsaha any an-toerana, raha nanontaniana. Tara ny fiavian’ny orana, tamin’ny taon-dasa, hany ka nandripaka izay efa voaketsa ny haintany. Vokany, na ny hohanin’ny tantsaha aza, tsy ampy ary voatery manafatra ny mpivarotra, amin’izao fotoana izao.
Tsy vaovao intsony ity resaka fiovaovan’ny toetr’andro ity ary efa maro izay karazam-pivoriana natao izay, hanomanana ny fiatrehana ny mety ho loza haterak’izany. Araka izany, tokony ho efa nampoizin’ny tantsaha io saingy, angamba, tsy mbola tafita ny hafatra mikasika ny fampanarahana ny fotoam-pambolena amin’ny fiovan’ny toetr’andro. Efa tsy zovina amin’ny mpitondra koa ity olana ity. Mbola izao ihany anefa ny zava-mitranga. Tsy manana politika matotra amin’ny fiatrehana ny toe-javatra toy izao ?
Mikasika izay indrindra, efa fantatra izao fa ho maromaro ihany ny rivodoza handalo eto Madagasikara amin’ity fotoam-pahavaratra ity. Hanampy izany ny ora-mikija, amin’ity desambra ity sy amin’ny janoary. Azo heverina sahady ny zavatra mety hitranga : tondra-drano, traboina, fahapotehan’ny voly isan-karazany, fahasimbana fotodrafitrasa, sns. Raha mpitondra mahay, araka ny tonon’ilay hira izay, efa manana paikady hiatrehana izany rehetra izany, tsy hahakamboty ny vahoaka, efa miady irery hatramin’izay.
Tsy iadian-kevitra fa misy ny rafitra natao hisahana izany. Ny fanontaniana fotsiny dia hoe : ampy ve ny vola sy ny fitaovana eo am-pelatanany ? Sa, sanatria, tena nisy, saingy efa niova lalana ? Raha toa ka ireo olana ateraky ny andro ratsy ireo no mbola hitranga sy hampahory vahoaka, tsy hahagaga intsony fa efa voavaly io ny antony.